बिहान आफैलाई बलियो पानी लाग्नको लागी बलियो बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। यदि एक व्यक्तिले शरीरको सुन्दर झिंगलिंग, उत्साह, एड्रेनालिन र निद्राको भावनालाई मनपर्छ भने हट्नेछ भने हटाउनेछ, सम्भवतः यो एक आदत हुनेछ। अर्को, तिनीहरूको डर, डर र किनभने, पानीको प्रक्रियाको लागि नमनपराउन उनीहरूको आदत बनाउन सक्दैन।
त्यसैले प्रेम "आदत बस" हुन सक्दैन। यदि तपाईं कुनै व्यक्तिसँग भाग लिन सक्नुहुन्न, आशा छ कि त्यहाँ कुनै प्रेम छैन, केवल तपाईं आदतमा राखिएको छ, तपाईं गहिरो गलत हुनुहुन्छ।
प्रेम बुझ्न कसरी एक आदत हो र प्रश्नको ढाँचा आफैमा सही छ कि - यसलाई यसलाई पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्।
प्रेम र सिगरेट
जो लोग निकोटीन निर्भरता छ, वास्तव मा, उनको खुशी को बंधक हो। तिनीहरूको निर्भरता खुशीको प्रेमको कारण हो, जुन तिनीहरू सिगरेट गरिएको सिगरेटबाट अनुभव गर्छन्। नयाँ प्याक, एक लिटरको चिर्स, एक सुरुचिपूर्ण, निस्सन्देही स्ट्रिमको धुलो, सहयोगीको साथ एक आकस्मिक कुराकानी खोल्ने एक सुखद क्षण ... यस्तो क्षण एक व्यक्तिको लागि सुखद छ, उसले धुम्रपान गर्न मन पर्छ। यो क्षण भौतिकशास्त्र भन्दा अधिक मनोवैज्ञानिक छ। सङ्गठनवादलाई धूम्रपान गर्न इन्कार गर्न सजिलो छ, यो पूर्ण आत्म-उपचार हुन्छ, जुन मनोचिकित्सकको बारेमा भन्न सकिँदैन।
वास्तवमा आदतबाट प्रेम र कसरी फरक भइरहेको छ भनेर धेरै फरक छ। प्रेम प्रेम रहिरहन्छ। यो एक सरल कारणको लागि बानी नबनाइन्छ: यो असम्भव छ कि हामीलाई असीमित र घृणित चीजहरूमा प्रयोग गर्न असम्भव छ। जुन बित्तिकै प्रेम पारिएको छ, जुनून गायब भएको छ, साझेदारले चिन्ता गर्न थाल्यो, त्यसैले यसका कारणले गर्दा यसको दुर्व्यवहार भयो - कसैलाई तपाईले राख्नेछैन। तपाईं आफ्नो खुशी को लागी अर्को व्यक्तिको साथ जान्नुहुनेछ। अन्यथा, तपाईं बस्नु हुनेछ, तर बानीको कारण होइन। तपाईं बच्चाहरू उठाउन रोक्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई अझ राम्रो भेट्न र एक्लै बस्न नसक्ने डर, तपाईं भौतिक पक्षलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, तर आदत छैन। प्रायजसो अवस्थामा, यो केवल एक बहाना हो।
जब हामी आदत गर्न चाहन्छौं भने आदतले प्रेमको आदतको बारेमा कुरा गर्न तार्किक हुनेछ। प्रेम पहिले आदत हुन्छ जब एक आदत हुनेछ। हेरचाह गर्ने आदत, एक मायालु जीवनको जीवनमा भाग लिने - हाम्रो व्यवहार प्रेमको आधारमा आदत बन्न सक्दछ। यसमा ठूलो भिन्नता छ। त्यहाँ एक अलग आदत हुन सक्छ र प्रेम सक्दैन।
अन्य शब्दहरूमा, प्रेम आदतको निर्माणको लागि एक आवश्यक अवस्था हो।
त्यहाँ माया छ?
यदि एक व्यक्ति मनपर्दैन र प्राप्त गर्दछ भने
महिलाहरु मा टेस्टोस्टेरोन बढायो - लक्षण
क्याथरीन जेटा-जोन्सको बिरुद्ध माइकल डगलस एक दादाको रूपमा हो
पीबीके 20 वजन घटानेको लागि
कालो जीरा - राम्रो र खराब
आफ्नो हातले Bezel
31 प्रमाण छ कि खुशी छ
लियोनार्डो डिकोपियो र केट विन्सलेटले डिनरलाई नीलामी गर्यो
साइडिंगको साथ कसरी काठको घर सिलाईयो?
गन्धको साथ छाला - सबै अवसरका लागि सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल
एक किशोरी केटी को कोठा को 12 वर्ष पुराना
स्तन ग्रंथिहरु को FKM
ग्राउण्ड मा मेकरेर पन्नी मा - उत्कृष्ट पिकनिक डिश को लागि सबै भन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
कसरी आकार र कठोरताको लागि स्नोबोर्ड जूताहरू छनौट गर्ने?
मालिश गर्न सक्छ
फलको रूख र झाडीको शरद ऋतु
पाउडर "ईयर नानी" - संरचना